Ciyaaraha Change Dadka Oo Booth dhowr khasnaji Job Description / Functions Oo Template Mas'uuliyadda - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Ciyaaraha Change Dadka Oo Booth dhowr khasnaji Job Description / Functions Oo Template Mas'uuliyadda
Yacquub June 28, 2016 Uncategorized 7 Comments 1,681 Views
lacagta caddaanka ah Exchange, calaamadihii, iyo chips for dollars customersA. soo saari laga yaabaa in aad u hesho saxiixa iibsadaha on biilka iyo sii fidda. tirin laga yaabo iyo lacagta canshuuraha ee u gura, ama ku shaqeeyaan isugu deyayso meel mishiinka Afyare iyo gudbiyaan bangiga lacag si ay u badalaan folks tan iyo bilowgii dhaqaaqo.
Ku xiran tahay dollar oo u gura lacag canshuurta.
Joogtee diiwaanada ku haboon suluxa iibsiga, noocyo oggolaansho, iyo is-weydaarsiga maaliyadeedka.
credit isku bedelasho, iyo chips casino, oo abuura loogu habeeyo iibsada.
Dhegayso ku guuleysatay for dawanno heegan Ghanna oo fidda dhibaato.
Ka dhig ilaalinta guri eey si waafaqsan mabaadi'da.
Mideeyo soo koobikaro waxa maalin walba of heshiisyo ay publications xasiloonida.
Workin halkaas oo booska-mashiinada laga heli karaa oo hubi gobolka ah in lagu meeleeyo dabaqa casino.
La helo saxiixyada clientsA on rasiidhada markii heshay dhaafo lacagta guud ee a-mishiinka Afyare.
chips dalab ciyaaraha, tikidhada isxigaan shaqaalaha kale ee ka iibin, ama in ay isxigaan, ama calaamadihii.
Go'aaminta ka qaybgalayaashu ka heshay ama khalad by by qalmo ee chips.
Jiidaan a-bangiga lacag tan iyo bilowgii kala iibsiga kasta inay u beddesho dadka.
Qaado codsiyada credit iyo xaqiijiyo tixraacyada credit si ay ugu deeqdo baari-alaabo aqbalo ama xitaa in la dhiso xisaabaha deynta guriga.
Naqdaan sida tusaale ahaan nadiifinta saxmadda lacag caddaan ah, dayactir yar oo ku saabsan slotmachines.
Career raad lagama maarmaan
Akhrinta fahamka oge diyaariyey weedho iyo khadadka ee waraaqaha shaqada la xiriiro.
wacyi Dhagaysi-Siinta Active dhamaystiran oo waxa dadka kale leeyihiin, waqti si ay u fahmaan arrimaha isuna lagu dhigay, codsanaya arrimaha sida saxda ah, oo aan marnaba mesmerizing at daqiiqado in ay yihiin aan la aqbali karin.
warqad Publishing-On sida ku haboon shuruudaha badnaa si guul hadlaya.
Isagoo ka hadlayay-hadalka dadka kale u gudbiyo macluumaad waxtar leh.
Xisaab-Isticmaalka xisaabta si uu u xaliyo dhibaatooyinka.
Science-Isticmaalka xal iyo xeerarka ay gacanta si loo xaliyo dhibaatooyin.
Fikirka la sabab muhiim-Dalbashada iyo sababaha loo aqoonsado faa'iidooyinka iyo khasaaraha of natiijooyinka, beddeli kale ama habab in dhibaatooyin.
muhiimadda Learning-fahmo macluumaadka cusub firfircoon ee ku saabsan mid kasta oo dhibaato xalinta iyo go'aan-qaadasho la joogo iyo mustaqbalka.
Barashada Qaababka-Doorashada oo la isticmaalayo habab trainingORinstructional iyo maaraysa habboon xaaladda marka waxbarashada ama dhibcood baridda kuwa cusub.
Hubinta-Korjoogteynta / La qabsashada waxtarka baxo uuna ka mid ah, akhyaarey in ay yihiin dheeraad ah, ama shirkadaha si ay u sameeyaan uqaadineed ama ka fiirsan tallaabooyinka sixid ah.
Social Perceptiveness-ka foojignaatid kuwa kale’ Dareen-celinta sababta ay u jawaabaan, maxaa yeelay, waxay u sameeyaan iyo fahmidda.
falalka Control-qabsashada la eego talaabooyinka othersI.
Qancinta-qanciyo dadka kale in la hagaajiyo dabeecada ama garashadoodii.
Dejinta-Qaadashada wada kuwa kale oo isha ku heysa inay heshiiyaan kala duwanaansho.
Bara-wacyi galiyo dadka kale loogu taraaroxo u dhaqaaqdo.
Orientation-Positively Service doonaya xeeladaha si loo caawiyo dadka.
Advanced Mushkiladaha-Go'aaminta diiddani sare iyo dib u info in la qiimeeyo la xiriira iyo in la dhiso ilaa xal kale oo codsan xal.
Hawlgallada Qiimeynta-Kormeerida u baahan tahay iyo shuruudaha xal in la abuuro style a.
Design-Technology Technology si ay u shaqeeyaan shakhsiga iyo in la sameeyo qalab ama guud ahaan doonayaan,.
Tools qalab Selection-Go'aaminta iyo nooca qalabka ee loo baahan yahay in hawl.
Wajigeeda-xiridda qalabka, mashiinada, taararka, ama barnaamijyo ay guud ahaan la kulmaan astaamaha.
baakadaha computer Barnaamij-Qorista ujeedooyin kala duwan.
Operation albabka Monitoring-Galitaanka, qiimaynta, ama calaamado kala duwan si loo hubiyo in qalabka la si sax ah u shaqeeyo.
hawlaha wax soo saarka ama nidaamyada shaqeynaya iyo Maamul-hortagidda.
Dayactirka-Bandhigyada qarashka xannaaneynta in uu yahay joogtada ah ee alaabta iyo go'aaminta marka iyo waxa sort of qarashka xannaaneynta lagama maarmaan noqoto.
Dhib-Go'aansiga sababaha qaladaad hawlgalka iyo doorashada sida ay u sii wadi ku saabsan wax kasta oo ka mid ah.
qalabka ama hababka celinta-Daboolid isticmaalka qalabka loo baahan yahay.
Quality Control Imtixaan-Bandhigyada baaritaanka iyo kormeerka ee items, adeegyada, ama nidaamyada si ay u qiimeeyaan tayada ama hufnaan.
View iyo Go'aan-la eego sicirka la barbardhigo iyo faa'iidooyinka ka mid ah tallaabooyinka laga yaabo in ay doortaan mid ka mid ah ugu habboon.
Falanqaynta-Aqoonsiga hagaajinta sida goobaha, hawlaha, iyo xaaladaha saameyn doonaa natiijooyinka iyo waxa sort of farsamo qabtaan waa in.
hababka ama signalada waxqabadka Methods Falanqaynta-Aqoonsiga ay la socdaan sax ah ama hawlaha loo baahan yahay in la xoojiyo ka shaqeynayaan, qaraabo u gool nidaamka.
Timemanagement-Maareynta ka mid ah ayaa munaasabadda shakhsiyeed iyo sidoo kale kuwa kale’ muddo.
Hawlgalka of Money-Go'aansiga sida doolar lagu maal doonaa si ay u bartaan hawsha dhameystirtay, iyo xisaabiyenimo kharashyadan.
Hawlgallada ee Maandooriyaha Resources-In qofka oo ay ogaadeen dhinaca adeegsiga haboon ee qalabka adeegyada, iyo qalabka qaybaha loo baahan yahay in la sameeyo shaqo gaar ah.
Hawlgalka of Workers Resources-dhiirrigelin, horumarinta, oo dooneysa waawayn sida ay u shaqeeyaan, pinpointing dadka ugu Shuqulkiinnu.
Shuruudaha Waxbarashada Shuruudaha Experience
Degree Senior High School (ama GED ama Senior School Certificate isu-)
In ka yar-badan Diploma Dugsiga Sare
Barnaamijyada Dugsiga badan ayaa
Management Skills Task Shuruudaha
dadaal – 87.08%
Gargaarka – 89.96%
Welwelina Qaar kale – 88.32%
Sinaanta Bulshada – 86.73%
gaynta cadaadis – 89.33%
hallayn – 93.58%
Wacyigelinta ee Details – 91.95%
halaynta – 88.67%
Adoo ka fakaraya Analytical – 87.80%
Laga yaabaa 2, 2019 at 10:05 pm
Pingback: Does Your Resume Scream| | dhulka hoostiisa
Pingback: Home Business: Your For You To Work Within Your Jammies! - Xarunta Blog Australia